Izindaba - Buyini ubudlelwano phakathi kokudangala eminyakeni yobudala kanye nokufakwa kukaTau?
Uhlelo Lokugeleza Kwamanxeba Okuvaliwe
Amabhola amathathu Spirometer
I-Latex Foley Catheter
Ipayipi le-Silicone Foley
Imikhiqizo Yesipanji Sezokwelapha
Buyini ubudlelwane phakathi kokudangala eminyakeni yobudala kanye nokufakwa kukaTau?
Ngokusho kocwaningo olusha lwabaphenyi e-UT Health San Antonio nasezikhungweni ezisebenzisana nalo, abantu abaneminyaka ephakathi nendawo abanezimpawu zokucindezeleka baphatha amaprotheni abizwa nge-APOE. Ukuguquka kwezakhi zofuzo ku-epsilon 4 Kwangathi kungenzeka kakhulu ukuthi kuveze i-tau buildup ezindaweni zobuchopho ezilawula imizwa nenkumbulo.
Okutholakele kushicilelwe kuhlelo lweJune 2021 lokuphrinta lweJenali Yesifo se-Alzheimer's. Isifundo besisuselwa ekuhlolweni kokucindezelwa kanye nasemfanekisweni we-positron emission tomography (PET) wababambiqhaza abangama-201 ocwaningweni lwezifo ezinhlobonhlobo iFramingham Heart Study. Isilinganiso seminyaka sababambe iqhaza sasingu-53.
Amathuba okuthola lesi sifo emashumini eminyaka ngaphambi kokuxilongwa
I-PET ivame ukwenziwa kubantu abadala asebekhulile, ngakho-ke i-Framingham STUDY on PET in middle age ihlukile, kusho uMitzi M. Gonzales, umbhali oholayo ocwaningweni nodokotela wezinzwa e-Glenn Biggs Institute for Alzheimer's and Neurodegenerative Diseases, okuyingxenye ye Isikhungo Sezempilo sase-University of Texas eSAN Antonio.
"Lokhu kusinikeza ithuba elithakazelisayo lokutadisha abantu asebekhulile futhi siqonde izinto ezingase zihlotshaniswe nokuqongelelwa kwamaprotheni kubantu abajwayelekile," kusho uDkt. Gonzales. "Uma laba bantu beqhubeka nokuthuthukisa ukuwohloka komqondo, lolu cwaningo luzoveza lawo mathuba emashumini eminyaka ngaphambi kokuxilongwa."
I-Beta-amyloid (Aβ) neTau ngamaphrotheni anqwabelana ebuchosheni babantu abanesifo i-Alzheimer futhi imvamisa anda ngobudala nangeminyaka. Ucwaningo alutholanga ukuhlangana phakathi kwezimpawu zokudangala nokudangala kanye ne-beta-amyloid. Yayihlotshaniswa noTau kuphela, futhi kuphela nabathwali be-APOE ε4 mutation. Cishe ikota leziguli ezingama-201 (47) zaziphethe ufuzo lwe-ε4 ngoba zazinokungenani i-allele eyodwa okungenani.
Ukuphatha ikhophi elilodwa lohlobo lwe-APOEε4 kwandisa ubungozi besifo i-alzheimer ngamahlandla amabili kuya kwamathathu, kepha abanye abantu abaphethe okuhlukile kofuzo bangaphila kuma-80s abo noma ama-90s ngaphandle kokuthola lesi sifo. “Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ngenxa yokuthi umuntu ukhonjwe ukuthi uphethe i-APOE ε4 akusho ukuthi uzoba nokuwohloka komqondo esikhathini esizayo,” kusho uDkt Gonzales. Kusho nje ukuthi izigxobo ziphakeme. "
Izimpawu zokucindezeleka (ukucindezeleka uma izimpawu zinzima ngokwanele ukuhlangabezana nalesi sibalo sokuxilonga) zahlolwa ngesikhathi sokucabanga kwe-PET neminyaka eyisishiyagalombili ngaphambi kokusebenzisa i-Epidemiological Research Center Depression Scale. Izimpawu zokucindezeleka kanye nokuhlangana phakathi kokudangala nemiphumela ye-PET ngezikhathi ezimbili kwahlolwa, kwalungiswa ngeminyaka nobulili.
Izikhungo ezingokomzwelo nezokuqonda
Ucwaningo lukhombise ukuhlangana phakathi kwezimpawu zokudangala kanye nokwanda kwe-tau ezifundeni ezimbili zobuchopho, i-entorhinal cortex kanye ne-amygdala. "Lezi zinhlangano azisho ukuthi ukunqwabelana kwe-tau kudala izimpawu zokucindezeleka noma okuphambene nalokho," kusho uDkt. Gonzales. "Siqaphele kuphela lezi zinto ezimbili ezithwali ze-ε4."
Ubalule ukuthi i-entorhinal cortex ibalulekile ekuhlanganiseni inkumbulo futhi ivame ukuba yindawo lapho ukubekwa kwamaprotheni kwenzeka khona ekuqaleni. Okwamanje, i-amygdala kucatshangwa ukuthi iyisikhungo esingokomzwelo sobuchopho.
"Kudingeka izifundo zesikhathi eside ukuze kuqhubeke ukuqonda ukuthi kwenzekani, kodwa kuyathakazelisa ukucabanga ngemiphumela yomtholampilo yalokho esikutholile ngokuya ngomthetho wokuqonda kanye nowemizwa," kusho uDkt Gonzales.
Isikhathi Iposi: 26-08-21
Ucingo + 86-17712779393
IKHELI Igumbi 1313, Cha 7 Isakhiwo, Shimao Plaza, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China